Andro-isan-andro - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Araka ny fijoroana ho vavolombelona ao amin’ny Soratra Masina, Andriamanitra dia Andriamanitra ao amin’ny olona telo mandrakizay, mitovy nefa samy hafa, dia ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Izy no hany Andriamanitra marina, mandrakizay, tsy miova, mahery indrindra, mahalala ny zava-drehetra, misy ny toerana rehetra. Izy no nahary ny lanitra sy ny tany, mpiaro izao rehetra izao ary loharanon’ny famonjena ho an’ny olombelona. Na dia ambony aza Andriamanitra dia miasa mivantana sy manokana amin'ny olona. Andriamanitra dia fitiavana sy hatsaram-panahy tsy manam-petra. (Marka 12,29; 1. Timoty 1,17; Efesianina 4,6; Matio 28,19; 1. Johannes 4,8; 5,20; TITOSY 2,11; Jaona 16,27; 2. Korintiana 13,13; 1. Korintiana 8,4-6) Tsy mandeha fotsiny izany hoe ny Ray dia Andriamanitra ary...
Andriamanitra tratranay: fitiavana velona
Rehefa anontaniana momba ny velona velona tranainy indrindra ny sasany dia mety manondro ny kesika Tasmanianina 10.000 40.000 taona na kirihitra 200.000 taona monina ao. Ny sasany mety mieritreritra bebe kokoa ny ahidrano taona eo amin'ny moron'ny Nosy Balearic Espaniola. Na dia antitra aza ireo zavamaniry ireo dia misy zavatra izay tena antitra lavitra - ary ilay Andriamanitra Mandrakizay, izay naseho ao amin'ny Soratra Masina ho fitiavana velona. Ny maha-Andriamanitra dia miseho amin'ny fitiavana. Ny fitiavana manjaka eo amin'ny olona ao amin'ny Trinite dia efa nisy hatrizay talohan'ny nahariana ny fotoana. Tsy manana ...
"Ary amin'izany, ry rahalahy sy rahavavy masina, izay mandray ny fiantsoana avy any an-danitra, dia mijere amin'ny apôstôly sy Mpisoronabe lazaintsika, dia Jesosy Kristy" (Heb. 3: 1). Ny ankamaroan'ny olona dia manaiky fa ny Krismasy dia lasa fetibe varotra sy varotra - ny ankamaroan'ny fotoana dia hadino tanteraka i Jesosy. Ny fanomezan-danja dia ny sakafo, divay, fanomezana ary fankalazana; fa inona no ankalazaina? Amin'ny maha-Kristiana antsika dia tokony hanahy ny amin'ny antony nanirahan'Andriamanitra ny Zanany tety an-tany isika.
Ny Krismasy dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona, ​​araka ny vakiantsika ao amin'ny Jaona 3:16. "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay". Tian'Andriamanitra hankafizantsika ny fanapahan-kevitra noraisiny handefa ny Zanany ho amin'izao tontolo feno ota ity. Natomboka tamin'ny zaza tao anaty fandrian-jaza tao amin'ny tranon'omby feno fanetren-tena.
Ny fialan-tsasatra mahaliana amin'ny Noely dia ny fanafohezana izay nanjary mahazatra antsika ankehitriny - "Xmas". Kristy dia nesorina tamin'ny teny hoe "Noely"! Ny sasany manamarina izany amin'ny filazany fa X dia mijoro amin'ny hazo fijaliana. Raha izany dia mbola ho hita eo raha ho azon'ireo mampiasa ny teny ny fanazavana.
Rehefa mankalaza ny nahaterahan'ny Mpamonjy antsika miaraka amin'ny namana sy fianakaviana dia tokony hofantarintsika tsara fa hitodika any aminy isika: "Tianay ny hibanjina an'i Jesosy, ilay mpialoha lalana, sy ny fahatanterahan'ny finoana - satria fantatr'i Jesosy ny fifaliana miandry azy, nibata ny fahafatesana teo amin'ny hazofijaliana ary koa ny henatra nifandray tamin'izany ary mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy izao ...
Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!
« Marina fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, nefa ho avy indray Aho ka hitondra anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako koa hianareo (Jaona 1.4,3).
Efa naniry fatratra ny zavatra ho avy tsy ho ela ve ianao? Ny kristiana rehetra, na dia ireo tamin'ny taonjato voalohany aza, dia naniry ny fiverenan'i Kristy, saingy tamin'izany andro izany sy tao anatin'izany vanimpotoana izany dia naneho izany tamin'ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: "Maranatha", izay midika hoe amin'ny alemà: "Tomponay! Andao!"
Ny kristiana dia manantena ny fiverenan'i Jesosy, izay nampanantenainy eo amin'ny andalan-teny etsy ambony. Mampanantena izy fa hiverina izy ary hijanona hanomana toerana eto ary ho any amin'izay misy azy rehetra isika. Nandeha nanomana ny fiverenany izy. Izany no antony nandaozana azy. Rehefa ny olona tiantsika indraindray dia miomana handeha, dia maniry ny hijanonantsika izy ireo. Fantatsika anefa fa manana antony handehanana izy ireo, ary i Jesosy koa dia nanana antony.
Azoko antoka fa miandry fatratra ny andro fiverenany Jesosy, toy ny ataon'ny Kristiana rehetra; tokoa, ny zavaboary rehetra dia mitoloko sy maniry fatratra ny andro handovan'ny zanak'Andriamanitra (Romana 8: 18-22). Ary angamba midika hoe mody any amin'i Jesosy koa izany!
Mariho ao amin’ny soratra masina eo ambony izay milaza hoe: “Hiverina aho haka anareo ho atỳ amiko, ka ho any amin’izay itoerako ianareo.” Tsy fampanantenana lehibe ve izany? Miverina imbetsaka ao amin’ny Soratra Masina io fampanantenana mahagaga io. Hoy i Paoly, izay nanoratra ho an’ny fiangonana kristianina voalohany, ao amin’ny 1. Tesaloniana 4:16 "Fa ny tenan'ny Tompo ihany, raha antsoina ny didy, ...